I-China Floor efakwe ngaphakathi kwesibonakaliso sokufuduka kwesikhanyisi / i-luminescent I-Luminescent glaze tile yokuphunyuka efektri nabakhiqizi | I-Grand Luminous
I-floor floor isimbelwe umhlahlandlela okhanyayo we-Luminous ceramic ngumkhiqizo okhanyayo ongasetshenziswa njengophawu lokuphepha kanye nemihlobiso yesakhiwo. Ukusetshenziswa kwendawo ehlukile kungaba odongeni, phansi, izitebhisi kanye nomsebenzi wobuciko egalari. Iningi le-ceramic yethu ekhanyayo nayo ilungele ukwakha okwayihlanganisa inqubo yendabuko yokusebenza nobuchwepheshe besimanje. Babonisa umphumela wokukhanya okungapheli, i-antiseptic, okuhlala isikhathi eside, nokuqina kwamakhemikhali. Ngemuva ...
Isikhombisi somhlahlandlela okhanyiselwe esisisekelo
Isimboli sokuphonsa phansi esishumeke ngaphakathi
1.Ama-tile we-luminescent ceramics we-luminescent akhiqizwa ngokungeza isithombe se-luminescent pigment inqubo yokukhiqiza ye-ceramics eyejwayelekile kanye nengilazi. Uma kuqhathaniswa nobumba kanye nengilazi ejwayelekile, imikhiqizo ingakhanya ebumnyameni ngemuva kokungenisa amalambu abonakalayo, okwenza ama-ceramics nengilazi asetshenziswe kabanzi.
5.I-Photo luminescent ceramics ingakhipha i-wave ethile yobude obuthile, enganqanda izinhlobo ezithile zethambile nezifo. Lesi sici sihlangabezana nombono ophilayo wemfashini futhi onempilo kubantu besimanje ngokusetshenziswa kwemikhiqizo ekhishini nasendlini yokugezela.
Esedlule: Uchungechunge olujabulisayo olujabulisayo olujwayelekile lwe-luminescent
Olandelayo: i-waterproof Photoluminescent pigment